Begineer Archives - Learning English Myanmar
Jan 22, 2019 | Begineer, Course, Skills, Speaking
Please speak slower. ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေးဖြေးပြောပါ။ Please take me to the airport. ကျေးဇူးပြုပြီး လေဆိပ်ကိုပို့ပေးပါ။ I’m looking for the post office. စာတိုက်ရှာနေတာ That way. အဲ့ဒီလမ်း The plane departs at 5:30P. လေယာဉ်ညနေ ၅ နာရီခွဲထွက်မယ်။ They arrived...
Jan 21, 2019 | Begineer, Course, Skills, Speaking
Certainly! သေချာတယ် Good afternoon. ကောင်းသောညနေခင်းပါ။ Good evening sir. ကောင်းသောညနေပါ လူကြီးမင်း။ Good Luck. ကံကောင်းပါစေ။ Good morning. ကောင်းသောနံနက်ခင်းပါ။ Great. လွန်စွာကောင်းတယ်။ Happy Birthday. ပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ။ Haveagood trip....
Jan 19, 2019 | Begineer, Course, Skills, Speaking
I’m cleaning my room. အခန်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်နေတယ်။ I’m cold. အေးတယ် I’m good, and you? ကောင်းပါတယ်။ မင်းကော I’m happy. ပျော်တယ်။ I’m hungry. ဗိုက်ဆာတယ်။ I’m married. အိမ်ထောင်ရှိတယ်။ I’m not busy. အလုပ်မရှုပ်ဘူး။ I’m not...
Jan 18, 2019 | Basic Vocabulary, Begineer, Course, Vocabulary
actually တကယ်တန်း again နောက်တခါ almost ခန့် already ပြီးနောက် alright ကောင်းပြီ also လည်းပဲ always အမြဲတန်း and နှင့် angry ဒေါသထွက်ခြင်း another နောက်ထပ် are ဖြစ်သည် at ၌ bad ဆိုးသော badly ဆိုးရွားစွာ because အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် beginner အစပျိုးသူ beside ဘေးမှာ best...
ကြိုတင် Booking လုပ်ခြင်း
Jan 17, 2019 | Begineer, Course, Skills, Speaking
What the customer says: ဖေါက်သည်က ဒီလိုပြောမယ် . (1) “I like to makeareservation for two people at 1 p.m.” နေ့လည်(၁)နာရီမှာ (စားဖို့) လူနှစ်ယောက်စာအတွက် နေရာသီးသန့်ချန်ထားဖို့ မှာကြားချင်ပါတယ် (reservation သီးသန့်ချန်ထားသောနေရာ) (2) “I bookedatable for two.”...
Jan 17, 2019 | Basic Vocabulary, Begineer, Course, Vocabulary
ATM=Automated Teller Machine အလိုအလျောက်ငွေထုတ်စက် 2.BP. =Blood Pressure သွေးပေါင်ချိန် 3.CEO. =Chief Executive Officer အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် 4.MoA =Memoradum of Agreement သဘောတူညီချက်စာချွန်လွှာ 5.MoU =Memoradum of Understand -ing နားလည်မှုစာချွန်လွှာ 6.PPP. =Public...